2017ပြီလ 30 | 87 ၏စာမျက်နှာ 2020 | NAB သတင်းများ | XNUMX NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » ဧပြီလ (စာမျက်နှာ 30)
NAB 2017 မှာသစ်နှစ်မျိုးကိုထုတ်ကုန်နှင့်အတူလာမည့်အဆင့်အထိထုတ်လွှင့်ယူမိုဘိုင်းရှုထောင့်
မိုဘိုင်းရှုထောင့်, ဦးဆောင် IP ကိုအလှူငွေဖြေရှင်းချက်ကုမ္ပဏီ, NAB 2017 မှာလာမယ့်အဆင့်အထိထုတ်လွှင့်နှင့်ဗီဒီယိုဖြေရှင်းချက်၏စံမြှင့်ရန်၎င်း၏အလုပ်ကိုပြပါလိမ့်မည်။ မိုဘိုင်းရှုထောင့်အစဉ်အမြဲရှေ့ပြိုင်ဘက်တဦးခြေလှမ်းတည်းခိုနှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားရရှိနိုင်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အလှူငွေဖြေရှင်းချက်ဖန်တီးကျူးလွန်ခဲ့ပြီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအဘို့ဤစိတ်အားထက်သန်ယခု ...
NAB Show မှာကို Global မီဒီယာကြော်ငြာအရောင်းပလက်ဖောင်းပွဲဦးထွက်မှ matrix Solutions
matrix Solutions ဟာ NAB ပြရန် 2017 မှာ, ဧကရာဇ်သူတို့ရဲ့အသစ်ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာကြော်ငြာရောင်းအားပလက်ဖောင်းမိတ်ဆက်လိမ့်မည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကလူရှေ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလေးပုံတပုံများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောက၎င်း၏ယေဘုယျလွှတ်ပေးရန်၏အသစ်ကပလက်ဖောင်း Demo အစည်းအဝေးတစ်ခုအချိန်စာရင်းနိုင်ပါတယ်ရှိရာပြပွဲ, ဧပြီ 24-26, 2017, စဉ်အတွင်း Wynn မှာ suite ကိုရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးပေါ်တွင်တည်ဆောက်ဧကရာဇ်, ...
NAB 90 မှာအကြီးစားပြင်ပထုတ်လွှင့် Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးစျေး Skyline 2017 အရည်ဌာနမှူး
Las Vegas, ဧပြီ 19, 2017 - ရုပ်ရှင်ရုံစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လေးလံသော-တာဝန်အရည်အကြီးအကဲများနှင့် tripod နှင့်အတူ၎င်း၏အလုပျအတှကျသိ Ronford Baker အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှု, LLC, ကင်မရာထောက်ခံမှုဖြေရှင်းချက်တီထွင်ဆန်းသစ်၏ထုတ်လုပ်မှုခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, , NAB 90 (Booth C2017) မှာ၎င်း၏ပွဲဦးထွက်အောင်, အ Skyline 7920 အရည်ဌာနမှူးကြေငြာလိုက်သည်။ အဆိုပါဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်း ...
Verizon ကဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ Newsy မိတ်ဖက် over-the-ထိပ်တန်းပံ့ပိုးပေးဘို့ကိုဗီဒီယိုအကြောင်းအရာရရှိနိုင်စေရန်
Los Angeles (ဧပြီ 19, 2017) - Verizon ကဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာန်ဆောင်မှုများယနေ့က Verizon ကဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာန်ဆောင်မှုများ Uplynk များအတွက်ရရှိနိုင် Newsy ကိုဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကို select စေသည်သဘောတူညီချက်အသစ်တစ်ခု inking, Newsy, လာမယ့်မျိုးဆက်များအတွက်အမျိုးသားရေးသတင်းကွန်ရက်ကနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတိုးချဲ့မူကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာ ဗီဒီယိုကိုလွှဝန်ဆောင်မှုဖောက်သည်။ သူတို့ရဲ့တစ် 24 /7တိုက်ရိုက်စီးတည်ဆောက်ရန်အကြောင်းအရာရှာကြံထုတ်ဝေသူများ ...
Tecom Group မှJüngerအသံနှင့်အတူနည်းပညာမိတ်ဖက်ကြေညာ
Tecom Group ကထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးကုမ္ပဏီနှင့်Jüngerအသံ, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ processors ကိုထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးကနည်းပညာပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြသည်။ ဤသည်မိတ်ဖက် Tecom Group ၏ကျယ်လောင်သော Analyzer ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့Jüngerအသံရဲ့အဆင့်ကို Magic ™ဟာ့ဒ်ဝဲ၏ပေါင်းစည်းမှုပါဝငျ။ တစ်ဦးကို real-time ဟာ့ဒ်ဝဲဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူ, တစ်ဦးချင်းစီအစီအစဉ်တွင်အစိတ်အပိုင်းအပေါ်အသံဒေတာရယူမရနိုင်ပါ။ Tecom Group ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ...
ပရိသတ်ကိုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration: 1 လ4/ 26 / 04 18 / 17 / 04 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အနေနဲ့ပရိသတ်ကို PA ဆိုပြီးသင်သည်အမျှအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted 26 / 17 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘစတင်သည် , လွှတ်ပေးမှုအတွက်စစ်ဆေးမှုများနှင့်အတူကူညီခြင်းဖြစ်, ရေချိုးခန်း / နေ့လည်စာအားလပ်ချိန်များတွင် load ထွက် load, စတာတွေကိုသင်ပရိသတ်ကို PA ဆိုပြီးအတှေ့အကွုံရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးမယ်လို့ ...
ထုတ်လုပ်သူ2လ, ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့ (အီတလီတွင်ကျွမ်းကျင်), CA Duration:,4/ 24 / 04 အပေါ် posted 18 / 17 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘ 04 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အလုပ်ရှာနေအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမစတင်သည် အီတလီတွင်ကျွမ်းကျင်စွာတစ်ထုတ်လုပ်သူအဘို့, post ကိုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ။ ယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်တစ်ဦးစာရင်းပေးသွင်းထားသူများအတွက်ယခု Subscribe? >> ပိုအတွက် Sign ကျေးဇူးပြု.
ကင်မရာအော်ပရေတာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Lancaster, SC Duration: 1 နေ့က -5/ 10 လစာ 04 / 18 / 17 05 / 10 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကအေဲနျဂြီလုပ်ဖို့ကင်မရာရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ယောဘကိုထောက်ပံ့ပေးမပေး မြန်နှုန်းမြင့်မောင်းနှင်အာရုံစိုက်နေတဲ့ရှိုးမေလတွင် 10th အပေါ် B-roll ။ Sony က C300 နှင့်အတူအတွေ့အကြုံရှိသည်, ဖြစ်နိုင်ရင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှိရမည် ...
30 ၏စာမျက်နှာ 87«ပထမဦးစွာ...1020«2829303132 » 405060...နောက်ဆုံး»